Nke a bụ nnukwu ndepụta nke akụkọ ntolite nke Akụkọ Akụkọ na Usoro Ọmụmụ | Martech Zone
Anyị ekekọrịtala isiokwu gara aga, Ihe niile I kwesiri ịma gbasara akụkọ gbasara Instagram, ma olee otu ụdị eji eji ha eme ihe iji chụpụ ahịa na ahịa? Dabere na # Instagram, 1 n'ime 3 nke akụkọ a na-elele anya sitere na azụmaahịa
Nkọwa Akụkọ Akụkọ Instagram:
Ndị ọrụ 300 nde na-arụsi ọrụ ike iji akụkọ kwa ụbọchị na Instagram.
Ihe karịrị 50% nke azụmaahịa na Instagram mere akụkọ Instagram.
N'ime 1/3 nke ndị ọrụ Instagram na-elele akụkọ Instagram kwa ụbọchị.
20% nke akụkọ ndị azụmaahịa zipụrụ rụpụtara mmekọrịta na onye ọrụ.
1 nde ndị mgbasa ozi nọ n'ọrụ nwere ohere ịnweta Akụkọ Ntanetị Instagram.
Ulo oru a emeela ka aka ha di ihe dika 20% mgbe ha na akwado onye oru ma obu ndi na-acho ihe na ntaneti Instagram ha maka ubochi ole na ole.
Ya mere, olee otu ụdị si etinye Akụkọ banyere Instagram ịrụrụ ha ọrụ? Ndị a bụ ụzọ 7 ndị ụdị na-eji akụkọ iji mee ka ndị ọrụ Instagram mara, itinye aka, na ire ahịa:
Nkwalite ngwaahịa - 36% nke akụkọ niile na-akwalite ire ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ.
Otu n'ime anya - 22% nke akụkọ niile na-enye ohere ịnweta ọdịnaya anaghị ahụ ebe ọ bụla.
Nchịkwa Influencer - 14% nke akụkọ niile jiri Mmetụta iji kwalite ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ.
Ihe Omume Nwee - 10% nke akụkọ niile bụ ihe omume na - eme.
Olee otú Iji - 5% nke akụkọ niile bụ otu esi vidiyo.
Ọdịnaya Fan - 4% nke akụkọ niile gụnyere nyocha na ịgba akaebe ndị ahịa.
Ntugharị - 2% nke akụkọ Instagram niile bụ maka asọmpi dị n'ime.
Ndị ọzọ - 7% nke akụkọ Instagram bụ ụdị akụkọ ndị ọzọ.
99firms kere ihe omuma a di egwu, Etu ulo ahia si eji akuko Instagram - 30 Case Studies, yabụ ị nwere ike ịmụtakwu banyere otu azụmaahịa ndị ọzọ si eji Akụkọ na-enye olu na agwa ha. Dị gụnyere Mercedes-Benz, DriveNow, Enel, AirPlay, Ticket.com, Country Road, Tokopedia, HiSmile, McDonald's, Asos, CoverGirl, Lego, Michael Kors, E! Akụkọ, Maybelline, Twitter, Nordstrom Rack, Brunch Boys, NASA, Buffer, Airbnb, MSNBC, Ọzọkwa, Glossier, IBM, Nri niile, Spy Valley Wines, MAC Cosmetics, Brit + Co, National Geographic, Reebok, Adidas, Aldo, Ulta , Sephora, Lowe's, Ugo America, Old Navy, na Gap.
Tags: 99firmsAdidasAirbnbAirPlayAldoAmerican EagleAsosỤlọ ọrụ + BritChmụ nwoke Brunchntupooikpe ọmụmụikpe ọmụmụUzo ObodoNwa agboghoDriveNowE! AkụkọEnelỌzọkwaọdịicheGlossierHiSmileIBMinstagram akụkọinstagram akụkọLegonwee nkeMAC ịchọ mmaMaybellineMcDonaldMercedes Benzmichael korsMSNBCNASANational GeographicNordstrom RackOld NavyreeboksephoraSpy Wines WinesTiketi.comTokopediaTwitterỌltaDum Nri